के बैसाखमा खुल्ला तातोपानी नाका? [फोटो फिचर]
दुर्गा दुलाल | २०७५ मङ्सिर २० बिहीबार | Thursday, December 06, 2018 ०६:००:०० मा प्रकाशित
तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)– चीनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तीन वर्षदेखि बन्द छ। जुन काठमाडौंबाट छोटो दुरीमा रहेको चीनसँग जोड्ने सीमा नाका हो।
२०७२ बैसाख १२ को भूकम्पपछि बन्द नाका कहिले खुल्ला?
यकिन जवाफ सरकारसँग पनि छैन।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रका सांसद अग्नि सापकोटाले आफ्नो पहिलो काम नै नाका खुलाउने बताएका थिए। निर्वाचनपछि पटक–पटक संसदमा उक्त कुरा उठाए पनि। तर, त्यसको कुनै समाधान निस्कन सकेको छैन। गाउँलेहरुले गरिरहने प्रश्नमा उनी 'छिट्टै खुल्ने' जवाफ दिएर टार्ने गरेका छन्।
नाका बन्द हुँदा बाह्रबिसे, लिपिङ, तातोपानी लगायतका बजार सुनसान छन्। दैनिक रुपमा करोडौंको व्यापार हुने उक्त क्षेत्रका अधिकांश होटल र लजहरु रिक्ता देखिन्छन्। केही होटल भने भग्नावशेषका रुपमा परिणत भइसकेझैं लाग्छ।
भूकम्पपछि भोटेकोसीको बाढीका कारण लिपिङ बजारदेखि मितेरी पुलसम्मको बाटो अवरुद्ध हुन पुग्यो भने माथिल्लो भोटेकोसी आयोजनासमेत जीर्ण बनेको छ।
नाका खुलाउन किन ढिला?
चिनियाँ पक्षले नाका खोल्न चासो नदेखाउनुमा धेरै कारण छन्। जस्तै: सुरक्षा, सडक र तस्करी लगायत।
न्यालोम (कुती) बाट सिधा सडक निर्माण गर्दै तत्काललाई सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा ल्याउने र पछि काभ्रेको पाँचखालमा नयाँ सुक्खा बन्दरगाह बनेमा त्यहाँ सार्ने गरी काम गर्ने चीनले प्रस्ताव पनि गरेको थियो। चीनले यो प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण नाका खोल्न ढिलाइ गर्ने बहाना थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पछिल्लो पटक चीन भ्रमणका जाँदा नाकाबारे चासो पनि राखेका थिए। उनले त्यसबेला मितेरी पुलको उद्घाटनसमेत गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्री रहेको समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चासो राखेर चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेका थिए। उनले नाका खोल्नका लागि प्रस्ताव गरे पनि चिनियाँ पक्षले थप अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै टारेको थियो।
सरकारका विशेष दूतका रूपमा २०७३ मा बेइजिङ पुगेका तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई ल्हासाका उपप्रमुखदेखि अन्य उच्च अधिकारीले नाका खोल्ने विषयमा नेपालको धारणा र योजनाबारे सोध्दा चीनका तर्फबाट नाका खुला गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।
चीनले छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि आग्रह गरेको थियो। जवाफमा नेपालले तातोपानी नाका पूर्ववत् अवस्थामा नफर्काई अन्य काम अघि नबढाउने जवाफ दिएको थियो।
नाका खुलाउन चीनको चासो
अहिले चिनियाँ पक्षले सीमाभन्दा ५ किलोमिटर वारि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ भने बाटो स्तरोन्नति र पुल निर्माण पनि थालेको छ। सडक सर्भेको काम भने दुवै तर्फबाट सम्पन्न भएको र सडक सञ्चालनका लागि आवश्यक पुल चिनियाँ पक्षले बनाउने र बाँकी सडक नेपालले बनाउने सहमति भएको छ। सामान्य सुधारपछि ट्रयाक खुले पनि स्तरोन्नति र फराकिलो बनाउने काम भने चलिरहेको छ।
कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा सरकारसँग सहमति भएकाले अब चिनियाँ नाका छिट्टै खुल्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। 'भत्किएका पुल निर्माणमा समेत सहयोग गर्न चीन सरकारले चासो राखेको छ,' उनले भने, 'हाल केही कामसमेत सुरु भइसकेका छन्।'
चीनले न्यालोममा भन्सार कार्यालय पनि बनाइरहेको छ।
जुरे पहिरो, भोटेकोसीको बाढी, गोरखा भूकम्प र लार्चाको पुल बर्खाले बगाएका कारण चिनियाँ पक्षले त्यसको मर्मत कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ।
२०७४ पुस ७ गते सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ र चीनका समकक्षीबीच तिब्बतमा छलफल भएको थियो। चिनियाँ पक्षले सो छलफलमा समेत सुरक्षा चासो राखेको थियो।
दलाई लामाको सक्रियता रहेको र त्यसलाई रोक्ने स्पष्ट खाका आउनुपर्ने चीनको अडान थियो । 'चीनको जायज सुरक्षा चासो र कामदारको सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाएपछि नाका खोल्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेका हुन्,' प्रजिअ अधिकारीले भने। काममा अवरोध नहुने, सडक समयमै सम्पन्न हुने र मितेरी पुलसमेत छिट्टै निर्माण गर्ने दोहोरो प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।
तर, पछिल्लो पटक सरकारले सुरक्षा संवेदनशीतामा ध्यान दिने बताएपछि आगामी मे (बैसाख) सम्म बाटो खोल्ने तयारीमा चिनियाँ पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।
चिनियाँ नाका खुल्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुक्खा बन्दरगाहको केही महिनाअघि अवलोकन गरेका थिए। बन्दरगाह निर्माणपछि चिनियाँ सवारीसाधान उक्त क्षेत्रसम्मै प्रवेश पाउने सहमति नेपाली पक्षसँग गरिएको छ।
उक्त सहमति गर्नुको कारण पनि सुरक्षा नै रहेको छ। नाका क्षेत्रमा पुन: फ्री तिब्बत गतिविधि सुरु हुन सक्ने भएकाले चिनियाँ पक्षले नेपालकै भूभागमा भन्सारको काम गर्न चाहेको देखिन्छ।
अहिले वस्तुस्थिति हेर्दा माथिल्लो भोटेकोसीको ड्यामदेखि लिपिङ बजारसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती देखिन्छ। खोला किनारदेखि सडक उठाउनुपर्ने भएकाले यसको जिम्मासमेत चिनियाँ पक्षले लिएको छ। चिनियाँ पक्षले सुक्खा बन्दरगाहलाई भने तीव्रता दिएको छ।